ဖတ်(စ်)မြန်မာအင်ဗက်(စ်)မဲ့(န်) အများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီလီမိတက်
မြန်မာသီလဝါအက်(စ်)အီးဇက်ဟိုးဒင်းပတ်ဘလစ် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်
မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော လီမိတက်
တီအမ်အိတ်ချ် ဆက်သွယ်ရေး အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
ထာဝရနဒီအုပ်စု ကုမ္ပဏီများ (အများနှင့် သက်ဆိုင်သော)လီမိတက်
အမတဟိုး(လ်)ဒင်း အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်
1 အာရှစိမ်းလန်းမှု ဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ်အများနှင့် သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက် Asia Green Development Bank Public Company Limited https://www.agdbank.com
2 ဘီဒီပီဘုရင့်နောင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အများနှင့် သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက် BDP Byintnaung Development Public Company Limited –
3 – Bhamo Bdpc Development Public Company Limited –
4 နိုင်ငံသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် Citizen Business Public Company Limited –
5 သမဝါယမဘဏ်အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် Co-Operative Bank Public Company Limited www.cbbank.com.mm
6 ထားဝယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအများပိုင်ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Dawei Development Public Company Limited –
7 တောင်သူလယ်သမားများဖွံ့ဖြိုးရေး အများနှင့် သက်ဆိုင်သောဘဏ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် Farmers Development Bank Public Co., Ltd. –
8 ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောထွက် ပစ္စည်း ဖက်စပ်ကော်ပိုရေးရှင်းအများနှင့် သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက် The Republic of the Union of Myanmar Forest Products Joint Venture Corporation Public Company Limited –
9 ဂျီဘီအက်(စ်)လယ်ယာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီ လီမိတက် G.B.S Agricultural Services Public Co., Ltd. www.gbs.com.mm
10 ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် Global Treasure Bank Public Co., Ltd. http://www.gtbmm.com
11 ရွှေနိုင်ငံ အရှေ့အာရှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် Golden Land East Asia Development Public Co., Ltd. http://www.glad.com.mm
12 ရွှေမြန်မာလေကြောင်း အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် Golden Myanmar Airlines Public Co., Ltd. https://gmairlines.com/en
13 ဂရိတ်ဟော်ခမ်းအများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် Great Hor Kham Public Co., Ltd. http://www.greathorkham.com
14 ကရင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအများနှင့် သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက် Kayin State Development Public Company Limited –
15 မန္တလေးစက်မှုဇုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီ လီမိတက် Mandalay Industrial Zone Development Public Company Limited –
16 မန္တလေးမြို့သာစက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အများပိုင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် Mandalay Myotha Industrial Development Public Company Limited http://www.mmidproject.com
17 မအူပင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအများနှင့် သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက် Maubin Development Public Co., Ltd. –
18 မြန်မာ့လယ်ယာထွက်ကုန်နှင့်အထွေထွေဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအများပိုင်လီမိတက်(အမ်အေဂျီဒီပီအယ်လ်) Myanma Agricultural & General Development Public Co., Ltd. –
19 မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် Myanma Economic Holdings Public Co., Ltd. http://www.mehl.com.mm
20 မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် Myanma Motion Picture Development Public Co., Ltd. –
21 မြန်မာအဂရီဘစ္စနက်ပက်ဘလစ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Myanmar Agribusiness Public Co., Ltd. http://www.mapco.com.mm
22 မြန်မာအက်ဂရိုအိတ်(စ်)ချိန်းအများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် Myanmar Agro Exchange Public Co., Ltd. http://www.maex.com.mm
23 မြန်မာ မော်တော်ယာဉ် ဖွံ့ဖြိုးမှု အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် Myanmar Automobile Development Public Company Limited http://www.madpcompany.com.mm
24 မြန်မာအက်ဒီဘယ်(လ်) အွိုင်း(လ်) အင်ဒတ် စထရီရယ် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Myanmar Edible Oil Industrial Public Co., Ltd. –
25 မြန်မာသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်ပိုရေးရှင်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Myanmar Information & Communication Technology Development Corporation Public Co., Ltd. http://www.mictdc.com.mm
26 မြန်မာဧရာဝတီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအများနှင့် သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက် Myanmar Irrawaddy Development Public Co., Ltd. –
27 မြန်မာလိုင်စင်ရကန်ထရိုက်တာများ အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက် Myanmar Licensed Contractors Public Co., Ltd. http://www.myanmarlcp.com
28 မြန်မာသကြားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအများပိုင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် Myanmar Sugar Development Public Co., Ltd. –
29 မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်အများပိုင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် Myanmar Telecommunication Network Public Co.,Ltd. http://www.mtnpcl.com
30 မြိတ်ကော်ပိုရေးရှင်းအများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် Myeik Corporation Public Co., Ltd. –
31 မြိတ်အနာဂါတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအများနှင့် သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက် Myeik Future Development Public Co., Ltd. –
32 မိုးကုတ်တော်ဝင်ရတနာ အများနှင့်သက်ဆိုင် သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် Mogok Taw Win Yadana Public Company Limited –
33 အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီအုပ်စုလီမိတက် National Development Company Group PCL –
34 ငွေလှိုင်းဧရာအများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Ngwe Hlaing Ayar Public Company Limited –
35 ဆယ့်နှစ်ရာသီဆောက်လုပ်ရေးအုပ်စုအများနှင့် သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီ လီမိတက် Oleander Construction Group Public Company Limited –
36 ရခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်ပိုရေးရှင်းအများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် Rakhine Development Corporation Public Co.,Ltd. http://www.rdcpublic.com
37 ရခိုင်စီးပွားရေးဦးဆောင်အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် Rakhine Economic Initiative Public Co., Ltd. –
38 – Region6Resource Public Company Limited –
39 ရှမ်းနီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအများနှင့် သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီ လီမိတက် Shanni Development Public Company Limited http://www.shannidev.com
40 အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Small and Medium Enterprises Development Bank Public Co.,Ltd –
41 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် Tanintharyi Division Development Public Co., Ltd. http://www.tddpcl.com
42 ထားဝယ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး အများပိုင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် Tavoy Trading Public Co., Ltd. –
43 – Unique Lawksawk Mango Public Co.,Ltd –
44 ရန်ကုန်ဘတ်စ်ကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Yangon Bus Public Co.,Ltd. www.yangonbuspubliccompany.com
45 ရန်ကုန်မြို့ပြအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Yangon Urban Public Transportation Public Co., Ltd. –